एमसिसी र वाइड बडीमा निर्माण गरिएका नकारात्मक बिम्ब ! :: Setopati
शंकरप्रसाद अधिकारी काठमाडाैं, फागुन १५
एउटै गलत कर्मले थुप्रै असल कर्म छायामा परेका छन्। असल कर्म छायामा नपरून् भन्ने जागरूकता पनि हामीकहाँ देखिँदैन। नकारात्मक भाष्य छ्यास्-छ्यास्ती छ।
भाष्यले अन्तत: विम्ब निर्माण गर्छ।
यसको एक उदाहरण हो, मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन 'एमसिसी'। यो सहयोग तुहाउनै गरी विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन। सम्झौताको चरणमा संलग्नहरूको कुनै खराब नियत थिएन होला। देशको अहीत कसैले सोचेको होइन। तर एमसिसीका पक्षपातीहरू राष्ट्रद्रोही हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ।
राष्ट्रियताको मानक पनि नेपालमा अनौठो देखिन्छ। असल मन र उद्देश्यको काममा पनि अपजशको भारी। अहिले एमसिसीको नकारात्मक भाष्यले 'राष्ट्रियता' विपरीतको विम्ब बनाउँदैछ।
एमसिसी लिने मात्र सम्झौतामा त उल्टो भाष्य निर्माण गर्ने 'राजनीति'ले वाइड बडीको भाष्यको पनि यस्तै बनायो। 'वाइड बडी'को नकारात्मक विम्ब जबर्जस्त निर्माण गरियो।
'वाइड बडी' खासमा नेपालीका लागि भरोसा हो, विश्वास र गौरव हो। आकाशमा वाइड बडी गर्जिँदैन मात्र, समृद्धिको शंखघोष गर्छ। यसले नेपालीलाई रोमाञ्चित गर्छ।
तर जसरी पनि गल्ती देखाउनै पर्ने, गल्ती भेट्टाउनै पर्नेका लागि स-शरीर 'वाइड बडी' दु:स्वप्न र जलन हो। तिनका लागि यो उकुसमुकुस हो, ऐठन हो। जरा अन्तै गाडेका ती ऐंजेरू, राष्ट्रिय सीमामा कैद छैनन्। तिनका लहराले मेची-काली सीमा नाघ्दै पृथ्वीको एक फन्को मार्छन्। काठमाडौंको आकाशमा वाइड बडीको गर्जनले तिनको निद्रा बिथोलिन्छ। वायु सेवा निगमको बढ्दो बजार हिस्सासँगै तिनको ब्लड प्रेसरको पारो चढ्छ। राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको हुर्मत लिन ती के मात्र गर्दैनन्। तिनीहरू राजनीति बाहिरै होलान्, तिनलाई राजनीतिले पन्छ्याउन सक्नुपर्थ्यो, सकेन। नेपालको दूर्भाग्य, राजनीतिले त्यस्ता ऐंजेरू पन्छ्याउनै सक्दैन!
वहुपक्षीय सहायता संस्थाको नेतृत्वमा रहेका मित्रले भन्थे, 'नेपाली राजनीति र प्रशासनमा विकास र समृद्धिको हुटहुटी देख्दै देखिएन।'
संस्था निर्माण न 'जागिरे'ले गर्छ, न सस्तो लोकप्रियताको राजनीतिले। जागिर त हाजिर गर्नबाहेक कलमै नचोप्नेले पनि खाएकै छन्। हदै भए सरूवा त हुने हो भन्ने पनि होलान्। जागिर त कसैले 'खाइदिँदैन'। निर्णयमा सहमत छैन भन्दा पनि भइहाल्छ।
त्यस्तै, राजनीति वा समाजमा लोकरिझ्याँइ पाउन पनि गाह्रो छैन। चौबाटोमा उभिएर ओली-देउवा-प्रचण्डलाई गाली गरे भइहाल्छ। अथवा एमसिसी र वाइड बडीको चर्को विरोध गरे पनि हुन्छ। मिडियाले लेखिहाल्छ, सामाजिक सञ्जालमा छाइहालिन्छ। गरेर पुर्‍याउन पो गाह्रो। संस्थाको हीतमा जोखिम लिएर काम गर्ने मान्छे पो चाहिएको। के हाम्रो 'राजनीति' र 'समाज'ले त्यस्तो सोच राख्छ?
हामी किन पछाडि पर्‍यौं? निर्णय नगरेर, काम नगरेर होइन? अपवादमा कहीँ नियतवस वा अञ्जानमा गल्ती निर्णय भएका होलान्। तर अपवादलाई नियम ठान्ने मनोरोगबाट हामी ग्रस्त हुँदैछौं। समाजमा असल र खराब सधैं रहन्छ। खराब तिरस्कृत नै हुनुपर्छ।
तर आत्ममूल्यांकन नगरी असल र खराबको निरपेक्ष चश्माबाट अरूलाई हेर्ने हाम्रो प्रवृत्तिगत समस्या हो। गुहु र गोबरलाई एकठाउँ गर्दा हामी पवित्र हुँदैनौं। यस्तो प्रवृत्तिले हामी गतिशील हुँदैनौं, संस्था बन्दैनन्। विकास र समृद्धि अवरूद्ध हुन्छ। पूर्वाग्रहग्रस्त भई नभएको गल्ती देखाउनैपर्ने सोचले बिगारेको छ यहाँ। 'इमान्दार' मात्र हुन त निर्णय नगर्दा नै काफी छ। तर निर्णय नगरी संस्था निर्माण हुँदैन। काम गर्ने, निर्णय गर्ने हिम्मत चाहिन्छ नै।
महाकाली सन्धी र अरूण तेस्रोको तीतो विरासतलाई एमसिसीले धान्दै गरेको हाम्रो राजनीति छ। 'वाइड बडी' जस्ता काल्पनिक विम्ब बनाउँदै संस्था निर्माणका कर्मठ शिल्पीको हुर्मत लिइँदैछ।
राजनीतिले तथ्य, विवेक र न्याय बोल्नुपर्छ। प्रकारन्तरका स्वार्थ नबोली तराजुमा तथ्य र विवेक तौलनुपर्छ। पल्ला जता भारी हुन्छ, त्यतै बोल्नुपर्छ। अनि पो समाज दिशा निर्देशित हुन्छ। राजनीतिले ठीक र बेठीक नपर्गेल्दा आज समाज बरालिएको छ। सत्य बोल्न दसचोटि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। नकारात्मक भाष्यको भुंग्रोमा सत्य खरानी हुँदैछ।
सिके लालको शब्द सापटी लिँदा, '(अ)सामाजिक सञ्जालमा सत्य र तथ्यलाई ठाउँ कम छ। यसले नै डोनाल्ड ट्रम्प, मोदी, बोल्सोनारो, एर्दोगान, दुतेर्तो जस्ता नेतृत्व जन्माउँदैछ।'
आज वायुसेवा निगम इतिहासको कठीन घडीमा छ। निगममा व्यवस्थापन सुधारको 'अर्जेन्सी' सरकारले बुझेन। सरकार एक थान महाप्रबन्धकको खोजीमा होला। यथास्थितिमा बस्ने हो भने डुब्छ। बनाउने हो भने आँट गरौं!
भारतले एयर इन्डियाको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेच्दैछ। निजीकरण पनि आर्थिक विकासको एउटा प्रकृया र पद्धति हो। हाम्रो राजनीति र समाजले त निजीकरणलाई 'संस्थान बेचेर खाने'को भाष्यमा कैद गरेको छ। उसो भए के भारतीय नेतृत्व संस्थान बेचेर खाँदैछ? भारतमा निजीकरण सम्बन्धमा राजनीतिक सहमति छ। भारतीयहरू ठान्दैछन्, निजीकरण गर्दा एयर इन्डिया बन्छ! के हामी त्यस्तो सोच्न सक्छौं?
भारतको सन् २०२०-२१ को बजेटले करिब चार प्रतिशत राजस्व (नेरू ३४ खर्ब) संस्थानको निजीकरणबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। हामी बजेटमा अहिले यस्तो लेख्न सकौंला? निजीकरणको पद्धति र प्रकृयागत कमजोरीमा सुधार गर्न सकिन्छ। तर हामीले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिले निजीकरणको सिद्धान्त नै अस्वीकृत गर्दैन होला नि?
वाइड बडी खरिद यत्तिकै गरिएको थिएन। निगम 'मर्ने कि गर्ने' अवस्थामा थियो। सरकारले बचाऊ भन्यो। चिकित्सकीय भूमिकामा निर्धाहरू आए। आज तिनैलाई 'जल्लाद'का नजरले हेरिँदैछ।
जस्तै: अहिले चीनको वुहानबाट नेपालीलाई ल्याउन वाइड बडी गयो, जानै पर्थ्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तीन हप्तासम्म अफ्रिका लगायतका मुलुकमा निगमकै जहाज लिएर हिँडे।
अनिर्णयको बन्दी हुनु हाम्रो महारोग हो। निर्णय नहुँदाको लागत हामी गणना गर्दैनौं। अनि निर्णय गर्‍यो कि जाइलाग्ने प्रवृत्ति छ। सबै निर्णय गलत मनसायले हुँदैनन्। एक त सुधारका सम्बन्धमा सरकारभित्रै सहमति नहुने, अर्को सहमति भए पनि विरोधै हुने डर। जोखिम कसले लिने। यही दुश्चक्रमा हाम्रो राजनीति र प्रशासन अल्झेको छ।
बेलायती भर्जिन एयरका मालिक अर्बपति रिचार्ड ब्र्यान्सन भन्छन्- 'तपाईंलाई अर्बपतिबाट लखपति हुनुछ भने एयरलाइन्स व्यवसाय सुरू गर्नु।'
पर्यटनको उच्च सम्भावनायुक्त मुलुकका लागि निरीह होइन, सबल ध्वजावाहक जरूरी छ। यसको जग हाल्ने काम वाइड बडी खरिदबाट प्रारम्भ भएको छ। जहाज अझ धेरै थप्नुपर्छ। तर त्यसभन्दा पहिले केही वर्ष निगमलाई विश्वासिलो र सक्षम व्यवस्थापनको जिम्मामा दिनुपर्छ। जसबाट अन्य एयरलाइन्ससँग 'कोड सेयरिङ' लगायत पद्धतिबाट अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क निर्माण गर्न सकिन्छ। राम्रो एयरलाइन्सले व्यवस्थापन लिएपछि निगमको विश्वसनीयता बढ्छ। अनि हरेक वर्ष जहाज थप्ने हिम्मत बढ्छ।
नेपालको पर्यटकीय सम्भावनाको दोहन गर्न निगमसँग कम्तीमा सयको संख्यामा विमान हुनुपर्छ। दस-पन्ध्र वर्षको रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नकारात्मक चिन्तन र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिमा यो सम्भव छैन। व्यवस्थापन चुस्त र दक्ष हुँदा मात्र निगमको आकार बढाउने हिम्मत आउने हो।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन १५, २०७६